Hugo BossBoss Selection EDT - 90ml | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
ပစ္စည်းအမျိုးအစား အားလုံး Kaymu စတိုး Kaymu ဖက်ရှင် Kaymu အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး Kaymu ဖုန်းများ Kaymu တက်ဘလက်များ Kaymu ကွန်ပြူတာများ Kaymu ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ Kaymu ကင်မရာများ Kaymu ဖျော်ဖြေရေးစက်ပစ္စည်းများ Kaymu အိမ်သုံးပစ္စည်းများ Kaymu စားသောက်ကုန်များ Kaymu ကားပစ္စည်းများ Kaymu အားကစားပစ္စည်းများ Kaymu ကလေးများအတွက် Kaymu ဘာသာရေးပစ္စည်းများ ဖက်ရှင် အမျိုးသမီးများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ညအိပ်ဝတ်စုံများ အသုံးအဆောင်များ အမျိုးသားများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ခြေအိတ်များ အသုံးအဆောင်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသား) ဂျင်းဘောင်းဘီများ ရှပ်များ နာရီများ အိတ်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသမီး) ဂါဝန်များ အိတ်များ နာရီများ လက်ဝတ်ရတနာများ TOP BRANDS TIMBERLAND NOBODY OUTDOOR PRODUCTS COZY CORNER MICHAEL KORS WOMEN'SECRET GUESS SPRINGFIELD VKK YANGOODS အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး ရေမွှေးများ အမျိုးသမီးသုံး အမျိုးသားသုံး မိတ်ကပ် မိတ်ကပ်ပစ္စည်းများ အလှပြင် ပစ္စည်းများ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းများ မျက်နှာအတွက် ကိုယ်ခန္ဒာအတွက် အလှအပရေးရာ စက်များ လက်သည်းအလှအပ ခြေ/လက်အလှအပ လက်သည်းနီ/ခြေသည်းနီများ ဆံကေသာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ခေါင်းလျှော်ရည် နှင့် ပျော့ဆေးများ ဆံကေသာသုံး ပစ္စည်းများ အမျိုးသားများအတွက် အသားအရေအတွက် မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်များ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆေးဝါးမျိုးစုံ ကျန်းမာရေးအတွက် ကိရိယာများ ဖြည့်စွက်ဆေးများ Top Brands MAYBELLINE YVES ROCHER MA'SURI POND'S THE BALM E.L.F COREANA ဖုန်းများ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ စမတ်ဖုန်းများ ခလုတ်ဖုန်းများ ကြိုးဖုန်းများ ဆက်စပ်ပစ္စည်များ စမတ်နာရီများ နားကြပ်များ စပီကာများ မမ်မိုရီကတ်များ ဖုန်းမျက်နှာပြင်အကာ ဖုန်းအားသွင်းကြိုးများ ဖုန်းအိတ်နှင့်ကာဗာများ ဘလူးတုသ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပါဝါဘန့်များ TOP BRANDS SAMSUNG XIAOMI APPLE SONY HUAWEI LENOVO တက်ဘလက်များ တက်ဘလက်များ တက်ဘလက်များ (၈"အောက်) တက်ဘလက်များ (၈"နှင့်အထက်) ၀ိုင်ဖိုင်ကွန်ယက် ဖုန်းကွန်ယက် iPadများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကာဗာများ ဘလူးတုသ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အခြားပစ္စည်းများ TOP BRANDS APPLE SAMSUNG XIAOMI ACER WAINFORD ကွန်ပြူတာများ လက်ပတော့ပ် များ နုတ်ဘုတ်များ Macbook များ ပရင်တာနှင့်စကန်နာများ ဘက်စုံသုံးပရင်တာများ လေဆာပရင်တာများ ရုံးသုံးပရင်တာများ ဟာ့ဒစ်စ်နှင့်မန်မိုရီကဒ်များ ဟာ့ဒစ်စ်များ မမ်မိုရီကဒ်များ မမ်မိုရီ စတစ်များ တွဲဖက်ပစ္စည်းများ လက်ပတော့ပစ္စည်းများ နားကြပ်နှင့် စပီကာများ ကီးဘုတ်များ ဒီဗီဒီစက်များ နက်ဝေါ့ပစ္စည်းများ ပရောဂျက်တာများ အခြားပစ္စည်းများ မောက်စ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ ကာဗာနှင့်အိတ်များ ဘတ်ထရီ နှင့် အားသွင်းကြိုးများ ကေဘယ်လ် ကြိုးများ ဒက်စတော့်ပ်နှင့်မော်နီတာများ All-in-ones တာဝါများ မော်နီတာများ TOP BRANDS Acer HP Asus ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ အိမ်သုံးဂိမ်းစက်များ အိတ်ဆောင်ဂိမ်းစက်များ ဂိမ်းစက်တွဲဖက်ပစ္စည်းများ ဂိမ်းခွေများ Playstation ဂိမ်းခွေများ Xbox ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ Nintendo Wii ဂိမ်းခွေများ Nintendo DS ဂိမ်းခွေများ အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကင်မရာများ ကင်မရာများ ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာများ ပိုလာရွိုက်ကင်မရာများ ဗီဒီရိုကင်မရာများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မမ်မိုရီကဒ်များ ဆယ်လ်ဖီစတစ်များ ဖျော်ဖြေရေးစက်ပစ္စည်းများ တီဗီများ LED တီဗီများ စမတ်တီဗီများ Plasma တီဗီများ Blu Ray နှင့် DVD စက်များ DVD Players Blu Ray Players iPod နှင့် MP3 များ နားကြပ်များ MP3 နှင့် အသံဖမ်းစက်များ စပီကာနှင့်အသံချဲ့စက်အသေးများ တီဗီ၊ဗီဒီယိုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 3D မျက်မှန်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်စနစ်များ စပီကာစနစ်များ စပီကာများ စပီကာများ ဒီဂျေ နှင့် ကာရာအိုကေ Hi-Fi စနစ် ကားဂျီပီအက်စ်နှင့်အသံစနစ်များ ကားတွင်းသုံးတီဗီများ TOP BRANDS Samsung Panasonic Philips Sony JVC အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အိမ်သုံးပစ္စည်းအကြီးများ ရေခဲသေတ္တာနှင့်ရေခဲစက်များ ပန်ကာများ လေအေးပေးစက် အ၀တ်လျှော်စက် အိမ်သုံးပစ္စည်းအသေးများ ဖုန်စုပ်စက်များ မီးပူ ရေနွးအိုးနှင့်ရေပူပေးစက်များ လေသန့်စင်ပေးစက် ရေပူ၊ရေအေးစက် အ၀တ်အထည်ထိန်းသိမ်းမှု ရေသန့်စက်များ လျှပ်စစ်မီးများ မီးဖိုချောင်သုံးစက်ပစ္စည်းများ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ ထမင်းပေါင်းအိုး မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖို ဟင်းချက်ပစ္စည်းများ ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိပ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်နှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများ အိမ်ပြင်ပသုံးစက်ကိရိယာများ အိမ်တွင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများ ပရိဘောဂများ အိမ်သုံး ရုံးသုံး TOP BRANDS Samsung New World Hisense ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ဂဏန်းပေါင်းစက်များ စက်ကိရိယာများ စားသောက်ကုန်များ စားသောက်ကုန်နှင့်အချိုရည်များ စားသောက်ကုန်များ အချိုရည်များ ၀ိုင်နှင့်ယမကာများ အခြား အကြောင်းအရာကဏ္ဍများ ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်သုံးပစ္စည်းများ ပွဲများနှင့်လက်မှတ်များ ကလေးများအတွက် စာအုပ် နှင့် စာရေးကိရိယာများ အားကစားပစ္စည်းများ ဈေးဝယ်လှည်း အကူအညီ လိုအပ်လျှင် Login ပင်မစာမျက်နှာ အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး ရေမွှေးများ အမျိုးသားများအတွက် Hugo Boss Boss Selection EDT - 90ml Hugo Boss Boss Selection EDT - 90mlBy Hugo Boss (2) သုံးသပ်ချက် ရေးရန် > အသေးစိတ် ကြည့်ရှုရန် အဓိက အကြောင်းအရာများTop notes - lively and fresh green notes, juicy grapefruit and mandarin, along with spicy pink peppercorn nuanceHeart notes - aroma of geranium, cedar leaves, star anise and petitgrainBase notes - patchouli,vetiver, cedarwood, heliotrope and transparent musky notesCountry of origin - GermanyAdditional shipping fees will be charged. Ks 89,610 Ks 149,350 -40% ယခု ၀ယ်ယူရန် မှတ်ထားရန် ရောင်းချသူ LUXASIA Myanmar ပစ္စည်းပို့ရန် ကြာချိန်2-4ရက် ရုံးဖွင့်ရက်အတွင်း ပို့ပေးပါသည်။ အာမခံချက် ပစ္စည်းအာမခံ အကြောင်းဖတ်ရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ 100% Authentic Product ပစ္စည်းရောက် ငွေချေစနစ် ၇ရက်အတွင်း အခမဲ့ပြန်ပို့နိုင်မှု အသေးစိတ်ကြည့်ရန် : Return Policy ကုန်ပစ္စည်း စစ်မှန်မှု သုံးသပ်ချက်များဖော်ပြချက်အညွှန်းအချက်အလက်များဝယ်ပြီးပစ္စည်း ပြန်ပို့ခြင်း/ပြန်လဲခြင်း5မှတ် (1)4 မှတ် (1)3 မှတ် (0)2 မှတ် (0)1 မှတ် (0)
ပျမ်းမျှအမှတ်ပေးချက် 4,52 နှုန်းအား အခြေခံ၍ ဤကုန်ပစ္စည်းအား သင်ယခင်က သုံးစွဲဖူးပါသလား?5432 1 သုံးသပ်ချက် ရေးရန် HUGO BOSS အမှတ်တံဆိပ်ကို ၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ အဆင့်မြင့်ဖက်ရှင် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ HUGO BOSS သည် ဖက်ရှင်လောကတွင် အဆင့်အတန်းမြင့် ဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်များ ထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိသည့် ကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ HUGO BOSS မှ အမျိုးသား အမျိုးသမီးများအတွက် ရည်ရွယ်၍ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိ ဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ HUGO BOSS ၏ အဓိက Collection များမှာ BOSS, BOSS Orange, BOSS Green နှင့် HUGO တို့ဖြစ်သည်။ BOSS အမှတ်တံဆိပ်သည် HUGO BOSS ၏ အဓိက Collection ဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးစစ်မှန်သည့် အဆင့်မြင့် ဖက်ရှင်များကိုသာ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ အမျိုးသားများအတွက် ထသွားထလာပုံစံကို မပျောက်စေဘဲ ခေတ်မီလှပပြီး စမတ်ကျသည့် ဖက်ရှင်အပြင် အလုပ်ပြီးချိန်တွင်ဝတ်ဆင်လေ့ရှိသည့် အဆင့်မြင့် အားကစားဝတ်အသုံးအဆောင်များကိုပါ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ အမျိုးသမီးများအတွက် မိန်းကလေးဆန်သည့် အဝတ်အစားများကို အကောင်းဆုံးပိတ်သားများကိုသာ အသုံးပြု၍ အသေးစိတ် ချုပ်လုပ်ထားပါသည်။ HUGO BOSS Orange မှာ သာမန်ထသွားထလာပုံစံကို ဦးစားပေးထုတ်လုပ်ထားသည့် ဖက်ရှင်မျိုးဖြစ်သည်။ BOSS Green သည် အဓိကအားဖြင့် အရည်အသွးကောင်းသည့် ခေတ်မီအားကစားဝတ် အသုံးအဆောင်များကို လက်တွေ့ကျကျဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသည့် ဖက်ရှင်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ HUGO Collection မှာ လုပ်ငန်းခွင်ဝတ် အဝတ်အစားများနှင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖက်ရှင်များကို ခေတ်မီဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားသော Collection ဖြစ်ပါသည်။HUGO BOSS မှ အဝတ်အထည်၊ ညနေခင်းပွဲတက်ဝတ်စုံ၊ အားကစားဝတ်စုံ၊ ဖိနပ်နှင့် အခြားသားရေသားအသုံးအဆောင်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ထို့ပြင် ရေမွှေး၊ မျက်မှန်၊ နာရီနှင့် ကလေးများအတွက် ဖက်ရှင်ပစ္စည်းများကိုပါ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ HUGO BOSS သည် ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ သူနှင့် တွဲဖက်လုပ်သည့် အခြားကုမ္ပဏီများကို အသေးစိတ် စီစစ်ရွေးချယ်ထားပြီး အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိ ချည်မျှင်နှင့် အခြားကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကိုသာ လက်ခံအသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ HUGO BOSS အမှတ်တံဆိပ် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို အဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖြင့် အရည်အသွေးမီ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ အဓိက အကြောင်းအရာများTop notes - lively and fresh green notes, juicy grapefruit and mandarin, along with spicy pink peppercorn nuanceHeart notes - aroma of geranium, cedar leaves, star anise and petitgrainBase notes - patchouli,vetiver, cedarwood, heliotrope and transparent musky notesCountry of origin - GermanyAdditional shipping fees will be charged.ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် Boss Selection EDT - 90ml SKUHU376HB0LMJS0NAFAMZ မော်ဒယ်လ်81031960 Weight (kg)0.2 Product warranty100% Authentic Product ဤပစ္စည်းကို ၀ယ်ပြီးအဆင်မပြေလျှင် ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်ပါသလား? ဤပစ္စည်းကို ၀ယ်ယူပြီး အဆင်မပြေမှု တစ်စုံတရာ ရှိပါက သင်လက်ခံရရှိသောနေ့မှ စ၍ ၇ရက်အတွင်း ပြန်လည် ပေးပို့ပြီး ငွေပြန်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
မည်သည့်အခြေအနေများလိုအပ်ပါသလဲ? အောက်ပါအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိပါက သင်၏ ပြန်လည်ပေးပို့မှုကိုလက်ခံနိုင်ပါသည်။ - ကုန်ပစ္စည်းတွင် seal ကပ်ခွာပါရှိလျှင် မပျက်ရပါ။ - ကုန်ပစ္စည်း၏ အထုတ်အပိုးမှာ နဂိုမူလအတိုင်း ဖြစ်ရပါမည် - ကုန်ပစ္စည်းသည် အသစ်အတိုင်းရှိရမည်ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုထားခြင်း မရှိရပါ။ - ကုန်ပစ္စည်း ပျက်စီးယိုယွင်းနေခြင်း မရှိရပါ။ည်။ လဲလှယ်/ပေးပို့လိုသော ကုန်ပစ္စည်းအား ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ လာရောက်မယူခင် (သို့) သင်ပြန်လာမပေးခင် အထိ ပစ္စည်းအား နဂိုမူလပုံစံအတိုင်း ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။